Robotics CNC Muchina Kurodha nekuburitsa - Yunhua Intelligent Equipment Co., Ltd.
Honyen Robot Robhoti yekubatanidza Dhipatimendi
Standard Robot yekubatanidza Solutions
Kero: No.8 Baijianshan Road, Feicai office, Xuancheng city Anhui province
Chinese Industrial Robot TOP Brand
Dzvanya neOver430 kugadzira matambudziko
Kudzokorora :± 0.05-0.08mm 100% AKAITWA MUCHINA
Chikamu 1 Nezve Honyen
Anhui Yunhua Intelligent Equipment Co., Ltd ibhizimusi resainzi uye tekinoroji rinobatanidza R&D, kugadzira, kutengesa uye kushandisa rine capital yakanyoreswa ye60 miriyoni yuan.Iine vashandi vanopfuura mazana maviri uye inovhara nzvimbo inopfuura 120 maeka.Kubva payakavambwa, Yooheart yakawana akawanda ezvigadzirwa uye anopfuura zana ekuonekwa patent zvigadzirwa zvine simba rakasimba, zvigadzirwa zvedu zvakapfuura IOS9001 uye CE certification, tinogona kupa marobhoti emaindasitiri nemabasa akasiyana uye inoenderana yakazara seti yemhinduro kune vazhinji vashandisi.Mushure memakore anopfuura gumi ekunaya kwehunyanzvi hwekuita tsvakiridzo nekuvandudza tekinoroji, "Honyen" iri kuvandudza nekugadzira mhando nyowani "Yooheart". Iye zvino tiri kuenderera mberi nemarobhoti matsva eYooheart. Madhizaini edu ega eRV anoburitsa zvinodarika mazana mana nemakumi matatu ematambudziko ekugadzira uye ane yakawana mudzimba RV inoderedza kugadzirwa kwehuwandu.
Yunhua yakazvipira kuvaka imba yekutanga-kirasi marobhoti brand.Isu tinotenda kuburikidza nekuedza kwese kweYooheart, tinogona kuwana "fekitori isina kurongwa"
Robhoti kushanda Station Show
Painting Robot Working station
Robot Stamping inoshanda Station
Robot Kucheka kushanda Station
Robot Aluminium welding inoshanda Station
Palletizing Robot Kushanda Chiteshi
Robot Kukuya Kushanda Chiteshi
Laser Welding Robot Kushanda Chiteshi
Kurodha uye Kuburitsa Robhoti system inoshanda Station
TIG welding Robot inoshanda Station
Rutsigiro rwekushambadzira, Pasevhisi yako, Gore rose
Ipa kwenguva refu kuchengetedza, Kudzidzisa uye Kukwidziridza
40 Mavhidhiyo Ekudzidzisa
Zviri nyore kudzidza, Kuchengetedza nguva yekudzidziswa uye kuoma kwekudzidziswa
Chikamu 2 Kusuma Project
Honyen Robot Kurodha uye Kuburitsa sisitimu Yehunyanzvi Project Overview
Iyo 6-axis robhoti inotakura uye inoturunura zvinhu zvembiri CNC lathes
Maximum chigadzirwa uremu: <80g
CNC Machine Machining Chikamu
Technical Data uye Tsanangudzo
1, Operation mode
Kushanda Fomu: semi-otomatiki
2, Tekinoroji maitiro
Hoister inotakura zvinhu
Dururira nemaoko zvinhu mubhini rekusimudza
Iyo hoist inotanga kurongedza otomatiki zvinhu kumutsara wekutumira kuti robhoti ribate
3, Robhoti inotakura uye inoburitsa zvinhu
Robhoti rinotakura uye rinoturunura zvinhu.Claw B inotora lathe A zvinhu
Gripper B ichaisa zvinhu patafura inotendeuka, inoshandura tafura
Gripper B inotora zvinhu zvetafura inotendeuka, gripper A inotora zvinhu zvelathe B, gripper B inoisa zvinhu zvitsva.
Gripper A inoisa zvinhu zvitsva mubhokisi
Dzokorora matanho ari pamusoro apa
Ongorora: Iyo robhoti gripper yakagadzirirwa maviri ekushanda chiteshi, uye hapana nguva yekukanganisa mukugadziriswa kwe2 CNC lathes!
Main Equipment uye Basa
Hositer general view
Schematic diagram ye rotary clamping cylinder
Chikamu 3 Robot Parameters
Chikamu 4 Kuiswa, Kugadzirisa uye Kudzidziswa
Asati asununguka, iro robhoti system ichaunganidzwa uye inoshanda zvizere kuyedzwa muAnhui Yunhua Intelligent Equipment Co., LTD.Mutengi anotumira workpiece kukambani yedu kuti agamuchirwe asati abva kufekitari.Munguva yekugashira kusati kwaitwa, vatengi vanoshanda vanowana yekutanga kudzidziswa kwehunyanzvi.
Chirongwa chekuisa uye zvinodiwa zvehunyanzvi zvichaendeswa kune mutengi mazuva makumi maviri isati yaiswa, uye mutengi achaita gadziriro nenguva zvinoenderana nezvinodiwa.Kambani yedu inotumira mainjiniya kuti aise uye agadzirise sisitimu yacho panzvimbo yemutengi, uye kupedzisa hurongwa uye kugadzirisa, kudzidziswa kwevashandi uye kugadzirwa kwemayedzo akawanda pasi pemamiriro ekuti mutengi anovimbisa zvikamu zvakakwana zvekugadzirisa.Kambani yedu inodzidzisa huinjiniya uye tekinoroji vashandi vehurongwa, kushanda uye kugadzirisa marobhoti system yevatengi.Vadzidzi vanofanira kuva nemamwe makombiyuta.
Panguva yekuisa uye kugadzirisa, mutengi achapa maturusi anodiwa, senge midziyo yekusimudza, forklift rori, tambo, uye sando drill.Vashandi vekubatsira kwenguva pfupi vanozopihwa panguva yekuburutsa nekuisa.
Yooheart ine basa rekutungamira kwekumisikidzwa kwemidziyo, kumisikidza uye yakabatana kudzidziswa kwevashandi, kudzidzisa kuchengetedza uye vashandi vekushanda.Anoda anosarudza vashandi kuti vashande, pakupedzisira kuti vakwanise kuita kwavo uye kugadzirisa kwemidziyo.
Zvemukati zvekudzidziswa: misimboti yemidziyo yedhizaini, yakajairwa magetsi ekugadzirisa matambudziko, yekutanga hurongwa hwekuraira hunyanzvi, hunyanzvi hwekuronga uye dzakajairwa zvikamu zvekuronga nzira, sisimo yekushandisa pani redziviriro, uye Q&A.
Kana vakasangana akakosha mamiriro, mativi esenegotiated kugadzirisa
Chikamu 5 Chinodiwa Chezvakatipoteredza
1.Voltage AC 380V, 3 phase four wire system (phase wire uye pasi waya)
2.Kakawanda: 50Hz ±1Hz;
3.Allowable fluctuation range: -10%～+10%
Ambient tembiricha: Kushanda tembiricha 0 ~ 45 ℃
Kutakura uye kuchengetedza tembiricha -20～60℃
Tembiricha coefficient 1.1℃/min
RH: Kazhinji tembiricha ye ambient i20% ~ 75%RH (hapana condensation zviitiko);Munguva pfupi (mukati memwedzi 1).Isingasviki 95% RH (kana pasina condensation).
1. Gasi uye zvidimbu zvinoshandiswa nevashandisi zvinofanira kuenderana nemitemo yenyika.
2. Mhepo yemhepo inofanira kuiswa kunze nechinhambwe chisingasviki mamita gumi nemashanu kubva pamoto wakavhurika, uye chinhambwe chiri pakati pegasi neokisijeni chinofanira kuva chisingasviki mamita gumi nemashanu.Mhepo inofanira kunge yakanyatsopinda mhepo, uye inofanira kuchengetedzwa kubva kumhepo nemumvuri.
3. Tarisa imwe neimwe nzira yemhepo usati washanda.Kana paine kudonha kwemhepo, kunofanirwa kugadziriswa kusati kwatanga basa kuve nechokwadi chekuchengetedza.
4. Mushandi haafaniri kuva nemafuta emafuta pamaoko ake paanenge achigadzirisa kudzvinyirira uye kuchinja cylinder.
5. Kunyorova kwezvakatipoteredza: kazhinji, hunyoro hwezvakatipoteredza huri 20% ~ 75%RH (apo pasina condensation);Nguva pfupi (mukati memwedzi mumwe) pasi pe95%RH (hapana chiitiko chekugadzirisa).
6. Mhepo yakamanikidzwa: 4.5 ~ 6.0kGF / cm2 (0.45-0.6mpa), mafuta akacheneswa nemvura, ≥100L/min.
7. Nheyo: iyo shoma kongiri simba iC25, uye hushoma hwaro ukobvu ndeye 400 mm
8. Vibration: Gara kure neiyo vibration sosi
9. Simba rekushandisa: Simba remagetsi ese anogadzirwa emagetsi nemagetsi ekushandisa anotora 50HZ (±1), 380V (±10%) matatu-phase AC voltage, achibvumira kushanduka: -10% ~ +10%, simbisa danho rekupa magetsi. grounding.
Pa-saiti masevhisi anopihwa nevatengi:
1. Kugadzirira kwese kwakakosha kusati kwatumirwa, semuenzaniso nheyo, gadziriro dzinodiwa dzekunze, kugadzirisa AIDS, nezvimwe.
2. Mutengi ari-saiti kuburitsa uye kutakura, rubatsiro rwenguva pfupi, nezvimwe.
Chikamu 6 Yekusimbisa Hunhu Sevhisi
Iyo nguva yekuvimbisa yemhando yezvikamu zvakakosha zvechishandiso ichi i1 gore kana 2550 maawa, chero anouya pekutanga.
Yunhua Intelligent Equipment Co., Ltd. inogona kugadzirisa kana kutsiva zvikamu mahara (EXW) kana yakakuvadzwa mukushandiswa kwakajairika uye michina iri mukati menguva yewaranti (zvinodyiwa, zvigadzirwa zvekuchengetedza, ma safes, zviratidzo uye zvimwe zvinodyiwa zvakasarudzwa nevedu. kambani haisi pasi pemuganhu uyu).
Zvekupfeka zvikamu zvisina waranti, kambani yedu inovimbisa hupenyu hwesevhisi yakajairika uye mutengo wekupa wekupfeka zvikamu, uye michina ine yakagadzika nzira yekugovera yemidziyo kweanosvika makore mashanu.
Mushure mekupera kwenguva yewaranti, kambani yedu icharamba ichipa hupenyu hwese yakabhadharwa sevhisi, inopa yakazara tekinoroji rutsigiro uye inodiwa yemidziyo yemidziyo.
Chikamu 7 Tarisa uye Kugamuchirwa Standard
Pre-check uye kubvuma
Kufanoongorora uye kugamuchirwa kuchave muAnhui Yunhua Intelligent Co,.Ltd, ichipindwa nevashandi vakakodzera kubva kumativi ese.Kufanoongorora uye kugamuchirwa kuchaitwa zvinoenderana nekukosha kweiyo workpiece inopiwa nemutengi kuti azadzise chinangwa chekushanda, uye pre-cheki uye yekubvuma yekuongorora report ichapihwa, uye zvinhu zvichaunzwa mushure mekupfuura kugamuchirwa.Kuti uone kutsetseka kwekutanga-cheki uye kugamuchirwa, mutengi achapa 4 seti yezvikamu zvakasara +1 seti yezvigadzirwa zvakapedzwa zvekugadzirwa zvakajairwa.
Kuongorora Kwekupedzisira uye Kugamuchirwa
Kugamuchirwa kwekupedzisira kunotenderwa nekuongorora kwedhipatimendi revatengi (kusanganisira kumisikidzwa kwemidziyo, kutariswa kwechitarisiko uye hapana-mutoro mabasa, nezvimwewo), uye iyo control system basa rekuratidzira mvumo.Mushure mekunge kugadzwa kwese uye kugadzirisa kwave kwakakodzera, kugamuchirwa kwekupedzisira kwemidziyo kuchaita nekusaina kwevamiriri vanogamuchirwa vemapato ese ari maviri.
Iwo makuru maitiro uye hwaro hwekugamuchirwa kwekupedzisira ndeaya anotevera:
1. 4 zvikamu zvikuru mukati mechikamu chechibvumirano chekambani yekuenderera mberi kwekushanda, uye unhu hwechigadzirwa hunosangana nezvinodiwa zvehutano.
2. Iyo midziyo ichasangana nezvinodiwa zveyakakodzera nyika zviyero uye zvibvumirano zvehunyanzvi.
Chikamu 8 Mafaira ane Chiteshi
Kuisa madhirowa: Kudhirowa kwekuvaka kwemidziyo nheyo, Equipment yekumisikidza dhizaini
Dhizaini yekudhirowa: General dhizaini yekudhirowa, wiring dhayagiramu
Mirayiridzo yezvinyorwa: mirairo yekushanda nekugadzirisa, Robhoti yekuraira Manual
Zvinamatidzwa: rondedzero yekutumira, chitupa, waranti kadhi